By သစၥာ | သ​စ္စာ on 8:06 AM
“အားလံုးြကားြကားသမှျ ၊ အမှျ၊ အမှျ ယူေတာ်မူြကပါကုန်ေတာ် ၊ သာဓု သာဓု သာဓု ”၊ ေကျးဇူးရှင် ဆရာေတာ် ဘုရားြကီး၏ အဆံုးအမကို ခံယူကာ (၈)ပါးသီလ ေဆာက်တည်ြပီး သက်သက်လွတ်စားခဲ့သည်မှာ နက်ြဖန်ဆိုလှျင် (၁၀)နှစ် ြပည့်ေပြပီ။ နက်ြဖန် ဆရာေတာ်နှင့် လိုက်သွားေတာ့မည်။ အမှျေ၀ြပီးေနာက် အိပ်ရန်ြပင်ပါသည်။
“ေဒါက် ေဒါက် ေဒါက် ၊ဆရာ တံခါးဖွင့်ေပးပါဦး၊ အေရးြကီးလာလို့ပါ”
အြပင်က လူစိမ်းတစ်ဦး၏ အသံ။ ဒီအချိန်ြကီးဘယ်သူများလာသလဲလို့ ေတွးရင်း တံခါးနားသို့ ကျွန်ေတာ်ကပ် သွားပါသည်။ အြပင်သို့ေချာင်းြကည့်လိုက်ေသာအခါ အေမှာင်ထဲတွင်ရပ်ေနေသာ လူငယ်တစ်ဦး။ ဘယ်သူမှန်း လည်းမသိ။ သတိေတာ့ထားမှ၊ ည(၁၁)နရီခွဲေကျာ်ေနြပီ။
“အြမန်ဖွင့်ပါဆရာ၊ တံခါးအြမန်ဖွင့်ေပးပါ ၊ ကျွန်ေတာ့်ကို ကူညီပါဆရာ”
အသံရှင်မှာ တကယ့်ကို ေသေရးရှင်ေရးြဖစ်လာေသာ ပံုမျိုးပင်။ ကျွန်ေတာ်လည်း တုတ်တစ်ေချာင်းကိုင်ြပီး တံခါးကို ြဖည်းြဖည်းချင်းဖွင့်ေပးလိုက်ပါသည်။ ၀ရုန်းသုန်းကားြဖင့် လူငယ်တစ်ဦး ၀င်လာပါေတာ့သည်။
“ဆရာ၊ တံခါးြပန်ပိတ်ေပးပါဆရာ ၊ ြမန်ြမန်ဆရာ”
ကျွန်ေတာ်လည်း သူေြပာသလိုပင် တံခါးကိုပိတ်လိုက််ပါသည်။ဆံပင်ကဖရိုဖရဲ့နှင့် အကျင်္ ီကလည်း မဲြပီးေပလို့။
“မင်း ဘယ်သူလဲ၊ ဘာကိစ္စလဲ”
“ကျွန်ေတာ့်ကိုမမှတ်မိဘူးလားဆရာ၊ အင်းေလး ကေလဆရာ”
ထိုအခါမှကျွန်ေတာ် သူ့မျက်နှာကို ေသချာြကည့်မိပါသည်။
“ဟုတ်တယ်ေလဆရာ၊ ကျွန်ေတာ်ပါဆရာ၊ ကျွန်ေတာ့်ကို ကယ်ပါဆရာ”
မှတ်မိပါြပီ။ လွန်ခဲ့ေသာ(၅)နှစ်ခန့်က ကျွန်ေတာ် အင်းေလးဘက်သို့ ဘုရားဖူးသွားခဲ့ပါသည်။ ေရာက်တုန်း ေရာက်ခိုက် အင်းေလးကန်၏ အလှအပကို ေမာ်ေတာ်ြဖင့်လိုက်၍ ြကည့်ရှုပါသည်။ ကံဆိုးစွာ ကျွန်ေတာ်စီးေသာ ေမာ်ေတာ်ေမှာက်ပါေတာ့သည်။ ကျွန်ေတာ်ေရမကူးတတ်ပါ။ ေြကာက်ေြကာက်လန့်လန့် ဆွဲွဲမိဆွဲွဲရာ ဆွွဲပါေတာ့ သည်။ ထိုစဉ် “ကျွန်ေတာ့်ကိုတွဲြပီးလိုက်”ဆိုေသာ အသံြကားရပါသည်။ ကျွန်ေတာ်လည်း အသံြကားရာသို့ လှမ်းစွဲပါသည်။ ထို့ေနာက် အသိ၀င်လိုက်၊ မ၀င်လိုက်နှင့် ပါသွားပါသည်။ ကမ်းေပါ်ေရာက်ေတာ့ ထိုလူငယ်က ြပုစုပါသည်။ လူငယ်မှာအသက်(၁၆)နှစ်ေလာက်ပဲ ရိှပါဦးမည်။ ေမာ်ေတာ်တွင်ပါလာေသာ လူငယ်ပင်ြဖစ်ပါ သည်။ အတူတူစီးလာေသာသူ (၃)ေယာက်ေသပါသည်။ ကျွန်ေတာ်ကံေကာင်းေလစွ။ ထိုစဉ်က ကျွန်ေတာ့် အသက်ကိုကယ်ခဲ့ေသာလူငယ်မှာ ယခုအိမ်ေပါ်သို့ေရာက်ရိှေနေသာ လူငယ်ပင်ြဖစ်ပါသည်။
“ေအးမှတ်မိြပီကွ၊ မင်းငါ့အသက်ကို ကယ်ခဲ့တဲ့သူပဲ”
“ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ၊ အခုကျွန်ေတာ်ဒုက္ခေရာက်လာလို့ပါဆရာ၊ ကျွန်ေတာ့ကို ကူညီပါ”
တစ်ခုခုကို စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စွာ အိမ်ေရှ့ကို ြကည့်ရင်းေြပာေနေသာသူ့ကို ကျွန်ေတာ်နားမလည်နိုင်ပါ။
“လိုက်ကွ ဒီနားေလးမှာပဲေပျာက်သွားတာ၊ရှာြက ရှာြက” ရပ်ကွက်ထဲမှ လူများ၏အသံပင်။
“မင်း မဟုတ်တာလုပ်လာတယ်မဟုတ်လား၊ ေြပာစမ်း”
“ဟုတ် ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ၊ ကျွန်ေတာ်လည်း မလွှဲသာလို့ပါ ၊ ကျွန်ေတာ်အေမအသည်း အသန်ြဖစ်လို့ ဒီြမို့ကို ေခါ်လာတာပါဆရာ၊ ဒီေရာက်ေတာ့ ေဆးဖိုး၀ါးခနဲ့၊ အသံုးစရိတ်ေတွေြကာင့် ပိုက်ဆံြပတ်သွားတယ် ဆရာ၊
ဒါနဲ့ ကျွန်ေတာ်လည်း လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်လိုက်မိတာပါဆရာ”
ခက်ြပီ ၊ ကျွန်ေတာ်ဘယ်လို လုပ်ေပးရမည်နည်း။သူ့ကိုဖွက်ထားလှျင်လည်း (၈)ပါးသီလ ပျက်ေပေတာ့မည်။ “ဦးေလး တံခါးဖွင့်ပါဦး၊ ကျွန်ေတာ်တို့ ေမးစရာရိှလို့ပါ”
ေဟာ အြပင်မှာ လိုက်ရှာတဲ့သူေတွေရာက်လာေပြပီ။
လူငယ်ကိုမေတွ့မိပါဘူးလို့ေြဖြပီးအနှစ်နှစ်အကာလေစာင့်ထိန်းခဲ့ေသာ (၈)ပါးသီလကိုအပျက်ခံကာ ကိုယ့်အသက်သခင် ေကျးဇူးရှင်ကို ကူညီေပးရမလား။ သူ့ကို မျက်ကွယ်ြပုြပီး ေထာင့်ထိန်းရမလား။ကျွန်ေတာ် ဘာကိုေရွးချယ်ရမလဲ။
ဇာတ်လမ်းေလးကို ဒီနားမှာပဲ အဆံုးသတ်လိုက်ပါတယ်။ မိတ်ေဆွတို့ ဆိုရင်ေကာ ဘယ်ဟာကို ေရွးပါမလဲ။ ကူညီြပီးေရွးေပးလိုက်ြကပါဦး
1 Response to 'သီလအပျက်ခံမလား'
http://linoo-ayar.blogspot.com/2007/11/blog-post_18.html?showComment=1195443682303#c4919323594232690429'> November 18, 2007 at 7:41 PM
အစ်ကိုေရ . . .ညီမေရွးြကည့်မယ်ေနာ် . . .
ညီမကေတာ့ အသက်သခင် ေကျးဇူးရှင်ကို ဖွက်ထားေပးမယ် . .ဘာလို့လည်း ဆိုေတာ့ သူတုန်းက အသက်နဲ့ ရင်းြပီး ကယ်ထားတယ်ေလ . .ခုလို အေြခအေနမျိုးမှာ ေကျးဇူးဆပ်လိုက်မယ် . . .သူကလည်း အေမ့ ေဆးဖိုးလိုလို့တဲ့ သနားပါတယ်ေနာ် . .အေမနဲ့ ပတ်သတ်လာလို့ သူမှာ ငါးပါးသီလေတာင် လံုေအာင်မထိန်းနိုင်ေတာ့ဘူး . . .လူတစ်ေယာက်ကို ေကျးဇူးဆပ်ဖို့ဆိုတာက ကံပါမှေလ. .အဲေတာ့ ြကံုတုန်းေလးေပါ့ေနာ် . .ကူညီလိုက်မယ် . . .ညီမမှားေနရင်လည်း သွန်သင်ေပးပါ . .ခုချိန်မှာ ညီမသာ ြကံုရမယ်ဆိုရင်ေတာ့ ရှစ်ပါးသီလကို အပျက်ခံလိုက်မှာလို့ ေြပာလိုက်ပါတယ်ရှင်။